Ezi zezona ntlobo zeentlanzi ziphumeleleyo ekulobeni ezemidlalo zaseSpain | Ngeentlanzi
Kuwo wonke umhlaba, kukho iindidi ezininzi zeentlanzi ezineempawu ezahlukeneyo. Iimpawu abazinikiweyo, ubukhulu becala, yinkqubo yokuziqhelanisa nendawo ezifumaneka kuyo ezi zilwanyana. Ngaphandle kwamathandabuzo, iSpain lelinye lamazwe anobutyebi obuninzi, ngokwe-biodiversity, emanzini ayo. Kweli nqaku siza kugxila kweyona ntlanzi imelwe kakhulu yimilambo namachibi aseSpain, kwaye enexabiso elilelona libalulekileyo kwimisebenzi enesiseko sokuloba kwezemidlalo..
Zininzi iintlobo zezilwanyana kwilizwe lethu, kodwa mhlawumbi zimbalwa ezigqame ngaphezu kwezinye, kwaye ezinqweneleka ngakumbi phakathi kwabalobi. Ngaphezulu, sithetha nge-pike, barbel, catfish kunye ne-trout.
3 Intlanzi yekati
I-pike yenye yeentlobo zeentlanzi ezingenayo eziye zafika kwilizwe lethu. Ndiyakuthanda ukuhlala kunxweme lwamachibi kunye namachibi amakhulu amanzi apho kukho utyani olushinyeneyo oluvumela ukuba lufihle kumarhamncwa anokubakho.
Kwilizwe lethu, kuqhelekile kuninzi usingasiqithi, ngaphandle kweendawo zaseGalicia. Ngokukodwa, ibekwe emanzini amadama omlambo iJúcar nakwimilambo yeendawo eziphakathi ezinje ngeeCastillas ezimbini kunye ne-Autonomous Community yase-Extremadura..
Inomzimba odibeneyo kunye no-cylindrical. Umlomo wayo ubufana ncam nobume bomlomo weentaka. Ubungakanani bale ntlanzi buxhomekeke kwinqanaba elithile kwindalo efumaneka kuyo, kodwa ihlala ifana nombala oluhlaza ocacileyo, othi ukhanye njengoko sihla ukusuka ngasemva ukuya esiswini.. Ubukhulu bususela kwiisentimitha ezingama-50 ukuya kwimitha, kwaye bunokufikelela kubunzima obungama-25 kg.
Ukutya kwi-pike kwiintlanzi ezincinci, ii-crustaceans, ii-amphibian, kunye neentaka. Kungenxa yoko le nto isisisongelo kwiintlobo zezilwanyana zemveli.
I-barbel ngokuqinisekileyo yenye yeentlanzi zaseYurophu ngokugqwesa. Ihlala kwiikhosi eziphakathi zemilambo, ngakumbi xa zinendawo enamatye. ESpain kuyinto eqhelekileyo ukubafumana kwimilambo emikhulu efana neTagus, iDuero, iGuadalquivir, njl.
Yintlanzi enkulu kakhulu. Umva wayo omde umde kwaye umfutshane, kwaye unomlomo omile okwe khoni. Luhlaza kunye negolide ngombala. Ubungakanani bentlanzi bunokudlula imitha enye ubude.
Ukutya kwabo yi-omnivorous, bakhetha izibungu zezinambuzane kunye ne-algae. Nangona ikwabonisa, ngamanye amaxesha, isimilo esiqhekezayo.
Ukuba kukho intlanzi enye ebhenela kubo bonke abathandi kunye nabathandi bokuloba, yiyo leyo ikatfish. Isidalwa esimangalisayo kwaye siyamangalisa.
I-catfish yintlanzi eyayinemvelaphi yayo kwimilambo emikhulu yeziko lelizwekazi laseYurophu. Apha, E-Spain, yaqala yafika kwindawo yokugcina i-Mequinenza phakathi kwiminyaka ye-XNUMX, kwaye ukusukela ngoko yasasazeka kwezinye iindawo ezinje ngomlambo i-Ebro kunye neerhafu zayo.
Inelungelo lokuba yeyona ntlanzi inde kuyo yonke iYurophu. Umzimba wayo, ucinezelwe kwaye ubude, unokulinganisa ngaphezulu kweemitha ezi-2.5 ubude, kwaye ungaphezulu kwe-100 kilogram ubunzima, phantse akukho nto!
Inokutya okutyayo, kuba ingumzingeli olungileyo. Esona sixhobo siphambili siyisebenzisayo ukubamba ixhoba laso ngumlomo omkhulu, ohluke ngamehlo amancinci. Ubungakanani beli silwanyana buhlaza okwesibhakabhaka kunye namabala amnyama nabomdaka kumphezulu, ngelixa isisu sikhanya ngombala, phantse simhlophe.
I-Trout yeyona ntlanzi ithandwayo ekulobeni kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi, Kubandakanywa eSpain (apho itrout emdaka eyinzalelwane yeIberia). Le ntlanzi yentsapho ye-salmon ihlala kwimilambo enamanzi anamaqondo obushushu asezantsi. Ezinye iintlobo zenza ubomi elwandle kwaye zibuyele emilanjeni, ngakumbi leyo zazalelwa kuyo, ukuze zizale. A le nto ibizwa ngokuba kukuzala ngokuvelisa amadlala.
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zetrout, kodwa oko kubizwa ngokuba yitrout eqhelekileyo ibonakaliswa ngokuba nombala omdaka ngasemva, nomhlophe emazantsi omzimba. Icandelo layo eliphakathi ligcwele amdaka amancinci, aluhlaza kunye namabala abomvu.
Ayisiyo ntlanzi inomzimba omkhulu kakhulu, kodwa inobude obungaphezulu nje kweesentimitha ezingama-30 ngokomndilili.
Itya izinambuzane kunye nemibungu yazo, ii-crustaceans ezincinci ezinje ngoononkala, iintlanzi ezincinci kunye nezinto eziphila emanzini. Ungumzingeli onobuqili.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba trout ngokwayo yenye yeentlanzi kunye nodumo olukhulu lokupheka.
Ngamafutshane, ezi zine ziintlobo zeentlanzi ezenza inqanaba lokuloba eSpain. Kubo, sinokongeza ezinye ezinje nge salmon okanye walleye..
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Uninzi lweentlobo ezixabisekileyo kwimidlalo yokuloba yaseSpain